"9 Nefa, ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. 10 Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina hianareo sady mbola manompo ihany. 11 Ary mbola irinay hianareo rehetra samy haneho izany fahazotoana izany mba hahazo ny fahatokiana be ny amin’ ny fanantenana hatramin’ny farany; 12 mba tsy hiketraka hianareo, fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin’ny finoana sy ny faharetana. 13 Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin’i Abrahama ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin’ny tenany Izy 14 ka nanao hoe: "Hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro anao". 15 Ary araka izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana. 16 Fa ny olona dia mianiana amin’izay lehibe noho ny tenany; ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny hampitsahatra ny fifandirana rehetra. 17 Ary amin’izany, raha Andriamanitra ta-haneho kokoa amin’ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsi-fiovan’ny sitrapony, dia nataony mafy tamin’ny fianianana izany, 18 mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain’Andriamanitra andaingana, no hahazoantsika famporisihana mafy, dia isika izay nandositra hihazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, 19 izay ananantsika ho vatofantsiky ny aina sady mafy no tsy mihetsika ary miditra any anatin’ny efitra lamba; 20 tany no nidiran’i Jesosy ho Mpialoha antsika, rehefa tonga Mpisoronabe "mandrakizay araka ny fanaon’i Melkizedeka" Izy.. Hebreo 6:9-20
Izany fanantenana izany no tian’ny mpanoratra ampitaina amin’ireo olona anoratany sy ho antsika koa. Inona no maha-mafy orina izany fanantenana izany?
Tsy manao tsinontsinona antsika Andria-manitra (9-12). Ny asa sy fitiavana rehetra asehontsika eo amin’ny asan’Andriamanitra dia tsy adinoiny ary hovaliany soa amin’ny fotoanany (10). Mampahery antsika Izy haka tahaka ireo mpanompony teo aloha amin’ny finoana sy ny faharetana (12). Izay tena tian’ny mpanoratra avoitra dia ny hananan’ireo mpamaky ny taratasiny faharetana sy fitozoana amin’ny fanompoana.
Ny ohatra asehon’i Abrahama (13-15). Fampaherezana mba hanandrana ny maha-mahatoky an’Andriamanitra sy ny tsi-fiovàn’ny teny fikasany no ataon’ny mpanoratra. Tsy olombelona Andriamanitra ka handainga (15, Nomery 23:19). Misy teny fikasan’Andriamanitra handrasanao ve ny fahatanterahany? Azony mafy ny finoana mba hahitanao ny voninahiny (Jaona 11:40). Ny teny fikasana lehibe indrindra dia ny fiainana mandrakizay: andraso amin’ny faharetana sy ny faherezana izany!
Antoka tsy mihozongozona (16-20). Mila olona lehibe noho Andriamanitra ve mba hanamafy ny Teniny? Tsia! Afaka matoky ny famonjena nataony ao amin’i Jesosy Kristy isika (18), izay mafy orina ao amin’ny fahamarinany.
Fanontaniana: Raha oharina amin’ny sambo ny fiainanao, Jesosy Kristy ve no vatofantsika tsy mampihozongozona azy?